ISBADALKA KLOPP: Liverpool Oo Lix Ciyaartoy Kooxdeeda Ka Diri Karta Bisha January Iyo Saddex Xidig Oo Muhiim Ah Oo Ay La Soo Saxiixan Karto. - Gool24.Net
ISBADALKA KLOPP: Liverpool Oo Lix Ciyaartoy Kooxdeeda Ka Diri Karta Bisha January Iyo Saddex Xidig Oo Muhiim Ah Oo Ay La Soo Saxiixan Karto.
November 17, 2018 Mahamoud Batalaale
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa isbadalo muhiim ah kooxdiisa ku samayn kara kadib marka ay dhamaadaan 43 ka maalmood ee inaga xiga suuqa kala iibsiga bisha January. Klopp ayaa wali dareensan in kooxdiisu ay horumar ka samayn karto qaab ciyaareedka fiican ee ay xili ciyaareedkan ku soo jirtay balse waxa uu taas ku muujin karaa in uu dhaq dhaqaaq cusub ka sameeyo suuqa kala iibsiga.
Kooxaha Premier league ayaa gali doona waqtiga mashquulka badan ee kulamada xidhiidhka ah ee Premier league la ciyaari doono laakiin waxaa soo baxay liiska lix ciyaartoy oo Liverpool ay iska iibin karto suuqa bisha Janaayo iyada oo badalkooda saddex xidig oo muhiim ah la soo wareegi karta.
Jurgen Klopp ayaa haddaba kooxdiisa ku haysa ciyaartoy badan oo aan shaxdiisa ka soo muuqan sababo kala duwan waxayna ciyaartoydani booskooda u lumiyeen kuwo qorshaha Klopp muhiim ka ah balse badalkooda waxa uu keensan karaa xidigo si xoogan u tartami kara.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkn idiinku soo gudbinaysa lixda ciyaartoy ee ay suurtogalka tahay in Liverpool ay iska iibin doono bisha January iyo waliba saddexda xidig ee lala xidhiidhinayo in ay Anfield keeni karto.
Lixda Xidig ee Ay Liverpool Bisha January Suuqa Kala Iibsiga Ku Diri Karto:
1- Nathaniel Clyne: Dhaawicii xumaa ee xili ciyaareedkii hore soo gaadhay ayaa sabab buuxda u noqday in Clyne uu si buuxda booskiisii u lumiyay waxaana Liverpool u soo baxay labada da’yar ee cajiibka ah ee Joe Gomez iyo Trent Alexander-Arnold kuwaas oo rayadiisii Anfield god dheer ku riday.
Clyne waxa uu saftay kaliya kulankii League Cupka ee ay Liverpool guuldaradu ka so gaadhay Chelsea waxayna u muuqataa in uu bisha January ka bixi doono Anfield amaah ama iib haddaba kii suurtogalka ah.
2 – Lazar Markovic: Marnaba fursad kamuu helin kooxda Klopp wuxuun ahaa dibad wareeg isaga oo amaah ku soo qaatay joogay kooxaha Fenerbahce, Sporting Lisbon, Hull iyo Anderlecht waxaana suuqii xagaagii la soo dhaafay la filayay in uu ku biirayo kooxaha Genao iyo Fiorentina balse bisha January waxa uu ka mid noqon doonaa liiska Anfield laga fasixi doono.
3- Divock Origi: Xidiga reer Belgium ayaa xili ciyaareedkii hore amaah ku soo qaatay kooxda Wolfsburg isaga oo 6 gool ku soo dhaliyay 31 kulan laakiin ilaa hadda ixli ciyaareedkan waxa uu sugaa fursad uu Klopp ka helo.
Kooxda Galatasaray ayaa doonaysay Origi laakiin sidoo kale kooxda Besiktas ayaa xiiso u haysay kaas oo aan suurtogal noqon in la dhamaystiro heshiiskiisa suuqii la soo dhaafay laakiin saamaynta Sturridge iyo Shaqiri ayaa fursadii Origi ee kooxda kowaad xadiday wuxuuna ka mid yahay liiska ciyaartoyda ay Liverpool fasixi doonto suuqa January.
4- Dominic Solanke: Waa mid kale oo ka mid ah gool dhaliyaasha uu Klopp kooxdiisa kowaad ku haysto balse aan haysan fursad ay kaga soo muuqan karaan shaxda Klopp. Solanke ayaa hadda u muuqda mid iskaga dhaqaaqi doona Anfield waxaana lala xidhiidhinayaa kooxaha West Ham, Crystal Palce iyo Newcastle United isaga oo amaah ama iib mid ku bixi doona.
5-Joel Matip: Shaqada cajiib ah ee ay Van Dijk iyo Joe Gomez ka qabanayaan difaaca dhexe ee Liverpool waxay god dheer ku riday rajadii uu Matip ka qabay in uu sii wato waayihiisa ciyaareed ee Liverpool wuxuuna hadda xidiga reer Cameroon arkayaa isaga oo aan door muhiim ah ku lahayn Reds.
Kooxda Fulham oo uu dhawaan la waregay Claudio Renieri ayaa doonaysa in ay Matip ka dhigato xidigaha ay xili ciyaareedka kooxdeeda ku badbaadin karto iyada oo 27 sano jirkani uu Anfield ka bixi karo bisha January maadama oo Klopp uu doorashada kowaad ka dhigtay Van Dijk iyo Gomez oo caawin ka helaya Dejan Lovern.
6- Fabinho: Xidiga reer Brazil ee Fabinho ayaa 40 milyan ugu soo biiray Liverpool suuqii xagaagii la soo dhaafay laakiin waxa uu waqti badan u baahday in uu la qabsado hanaanka ciyaareed ee Klopp wuxuuna si joogto ah u soo ciyaaray kulamadii ugu danbeeyay oo uu muujiyay qaab ciyaareed isku dhaf ah.
Waxaa jira shaki wayn oo soo galay mustaqbalka Fabinho iyada oo lala xidhiidhinayo kooxaha AC Milan iyo PSG balse lixda ciyaartoy ee ay suurtogalka tahay in ay Anfield ka baxaan bisha January waxaa ugu suurtogalnimo yar Fabinho kaas oo aan wali ka quusan in uu booskiisa u dagaalamo.
Bogga 2-aad Kaga Bogo Ciyaartoyda Liverpool ay doonayso